Umatasa kakhulu Isigamu sokuqala 2021 se-Ellicott - Ellicott Dredges
Umatasa kakhulu Isigamu sokuqala 2021 se-Ellicott
Ingxenye yokuqala ye-2021 ibisebenza kakhulu ku-Ellicott Dredges, LLC futhi zombili izindawo zokukhiqiza zaseBaltimore naseNew Richmond bezimatasa zakha futhi zithumela izindawo emhlabeni wonke. Kusukela ngoJuni 10, u-Ellicott kuze kube manje:
Kuthunyelwe okuphelele kwama-dredges we-14 nezikhuthazi, kumakhasimende ahlukene ayi-11 emazweni ahlukene ama-5.
Okungu-9 kwalokhu kuthunyelwa kwakungu-Dragon® Cutter Suction dredges, aqala ngosayizi namamodeli kusuka kuma-370HPs (10 ″) kuye kuma-2070s (20 ″)
Kuthunyelwe imihlangano emi-5 ye-Booster Pump kumakhasimende, kufaka phakathi i-20 ″ Tier 4 Booster entsha ka-Ellicott (okuningi ngalo mkhiqizo omusha ngezansi)
Konke lokhu kuthunyelwa kuhlangene kudinga amaloli angaphezu kwama-50 ukuthunyelwa!
Uchungechunge lwe-670 Dredge Shipping oluvela eBaltimore Factory
I-Ellicott Field Tech Josh Moscati eSizeni ene-20 ″ Booster Pump ku-Operation
I-EPA Tier 4 20 Oper Ukulekelela Iphampu Ukusebenza
Iphampu esanda kukhishwa ye-20 ″ booster ka-Ellicott ifakwe injini ye-EPA Tier 4 elinganiselwe ku-1125 HP (838 kW). I-booster njengamanje isebenza ukusekela iphrojekthi ye-US Corps of Engineers 'DMP ePoplar Island, eMaryland. Le phrojekthi ifaka phakathi ukulayishwa kwevolumu ecishe ibe yizigidi eziyi-1.9 yd3 yempahla ebunjiwe endaweni yokubekwa.
I-Ellicott inikeza umugqa ophelele wamapayipi okusika aphathekayo namaphampu wokufukula aqhamuka ezindaweni zethu ezimbili: Amahhovisi amakhulu ezitshalo nezikhulu eBaltimore, eMaryland, nasembonini yesibili eseNew Richmond, eWisconsin, e-USA.